Paris Descartes University - Study muFrance. European Education
inotangwa : 1150
Musakanganwa kuti kurukura Paris Descartes University
Kunyoresa pana Paris Descartes University
Paris Descartes University ainziwo “Paris V“, ndiko French yavose tsvakurudzo yunivhesiti iri muParis. Ndezvenguva kutungamirira dzingaparwe mubatanidzwa Sorbonne Paris kumbotipa. Rakavakwa kuti ubudirire themedicine dhipatimendi wechipiri mukuru zvedzidzo sangano kwenyika, ari University of Paris (kazhinji akataura sezvo Sorbonne), nguva pfupi asati ekupedzisira kwaitanga kurega kuvapo musi December 31, 1970, sezvo migumisiro French nemagariro chimurenga pamusoro 1968, kazhinji kunzi “rechiFrench May”. Zviri imwe yakanakisisa uye chinonyanya nomukurumbira French mumayunivhesiti, kunyanya dzine sayenzi yezvokurapa, sayenzi anorapa achishandisa mitemo, mutemo, kombiyuta sainzi, dzezvoupfumi uye zvepfungwa.
Makuru enhoroondo École of Chirurgie muna 6th arrondissement muParis, yunivhesiti rinonyanya zvakasimba pamusoro sayenzi yezvokurapa (mushonga, mazino mushonga, chitoro chemishonga, wepfungwa), sayenzi anorapa achishandisa mitemo (cellular uye ezvinhu zvipenyu, nemakemikari omuviri, kemesitiri, anorapa achishandisa mitemo physic), sayenzi evanhu (wemagariro evanhu, anthropology, zvemutauro, Demographics, sainzi dzidzo), masvomhu, kombiyuta sayenzi mutemo (ruzivo rwokugadzira mutemo, bhizimisi mutemo, mutero mutemo, mutemo paruzhinji, private mutemo…).
A chikuru danda kutsvakurudza uye kudzidza, Paris Descartes – Sorbonne Paris Taura chimwe chezvinhu nomukurumbira mumayunivhesiti muFrance uye akanakisisa chete zvayo chikuru nzvimbo. On kuti hwaro pakati vamwe, zvakanzi yavose sezvavakatarirwa nokuda 2013 QS World University chepamusoro 51-100th muna Pharmacy uye Pharmacology (1there muFrance), 101-150fung muna Biological Sciences (1there muFrance), 100fung Zvemishonga (kutanga muFrance), 151-200fung muna Psychology (1there muFrance), 151-200fung muna zvemutauro (2da muFrance), uye 151-200th muMutemo (2da muFrance). Rakanga wo yavose sezvavakatarirwa nokuda 2015/16 The Times yepamusoro Subject Rankings sezvo rechi73 (2da muFrance) yakanakisisa University mu Clinical, Pre-zvekuchipatara uye Health.
The University Paris Descartes hunotsigira ano kusvika sciences munzanga pahwaro fieldwork, mukwikwidzi rucherechedzo uye ethnography (RaTenzi dhigirii zvetsika nemagariro anthropology, panguva School of nevanhu uye sayenzi nemagariro – Sorbonne). dhigirii hunyambiri tenzi wacho (“Economics and Psychology” uye “Cogmaster”) achidyidzana nevamwe inokosha French kwomudzidzi masangano akadai Pantheon-Sorbonne University uye École Normale Supérieure unosimbisa mikana kusvikira tsvakurudzo nezvokubhadharwa.
Fakaroti nhengo zvaisanganisira yokufeva jurists, vanachiremba uye zvematongerwo enyika.
With kwayo Training nokutsvakurudza madhipatimendi mapfumbamwe (UFR) uye yayo Institute of Technology (IUT), Paris Descartes University unosanganisira zvose kuminda ruzivo kwevanhu uye utano sayenzi. Ndiyo chete University of Ile-de-France kudunhu kupa mishonga, mishonga uye odontological zveBhaibheri; ayo utano dhipatimendi Inozivikanwa muEurope uye munyika yose nokuda hwaivapo kurovedza wayo uye kunakisa pakutsvakurudza wayo.
Saints UFARISINI rorusununguko anorapa achishandisa mitemo Sciences
Rorusununguko Mathematics uye Computer Studies
Rorusununguko Pharmaceutical uye Biological Sciences muParis
Rorusununguko Human uye Social Sciences
Rorusununguko Sports Nokusangana Education (STAPS = Sciences uye Techniques mumuviri uye Sports Activities)
Enhoroondo University of Paris kutanga akazviratidza yechipiri yezana remakore rechi12, asi akanga kurongwazve mu 1970 sezvo 13 zvionera mumayunivhesiti mushure mudzidzi okutsutsumwa rechiFrench May. Zvichitevera mwedzi kunetsana pakati vadzidzi uye zviremera paUniversity Paris pa Nanterre, kwokubatsira akavhara pasi kuti yunivhesiti musi May 2, 1968. Vadzidzi Sorbonne akaramba kuvhara uye pangozi kudzingwa vadzidzi vakawanda panguva Nanterre musi May 3, 1968. Kupfuurisa 20,000 vadzidzi, Vadzidzisi uye vatsigiri vakafora vakananga Sorbonne, vachiri chisimbiso kure nemapurisa, uyo mhosva, Pakushandisa batons dzavo, achangopera marchers akaswedera. Nepo vakapararira revanhu, Vamwe vakatanga kusika kwezvinovharidzira kubva zvose zvakanga waswedera, apo vamwe vakakanda tichigadzira matombo, kumanikidza mapurisa kuti shure kwenguva. Mapurisa akabva vakaratidza misodzi gasi uye mhosva zvakare vazhinji. vadzidzi Mazana zvakawanda vakasungwa.
Nhaurirano akaputsa uye vadzidzi vakadzokera pazvikoro zvavo pashure nomushumo nhema kuti hurumende yakanga yabvuma kuti ovhurazve navo, tozoona mapurisa achiri akagara zvikoro. Vadzidzi ava vaiva pedo echimurenga kudzikama. Chimwe ratidziro rakarongwa pamusoro Rive Gauche nevadzidzi musi May 10. Bope mapurisa zvakare chakavhara kubva kuyambuka rwizi, chaunga akakanda zvakare kwezvinovharidzira, iyo mapurisa yakazorwisa pa 2:15 mangwanani pashure Nhaurirano kamwe zvakare yakavafukidza. pavanotaurirana, izvo zvakaunza mazana kusungwa uye kukuvara, kusvikira mambakwedza zvinotevera zuva.
Miriyoni vanhu akafamba Paris neMuvhuro, Chivabvu 13; Mapurisa akasara kunyanya pamberi. Prime Minister Georges Pompidou pachake akazivisa kubudiswa vasungwa uye kuvhurwa ari Sorbonne. zvisinei, sefungu parinouya havana taramuka. pachinzvimbo, vairatidzira vacho kunotonyanya vanoshingaira.
Apo Sorbonne rakavhurwa, vadzidzi kunogarapo akahududzira imwe zvionera “vanhu payunivhesiti.” anenge 401 Matare nevakawanda chiito akaumbwa Paris, kusanganisira basa Committee of Sorbonne, nokumwewo mumavhiki akazotevera kuti atore zvichemo kurwisa hurumende uye vanhu French.
With kuwa French Rechina Republic pashure pezviitiko zvinovhiringidza zvezuva May 1968, French Fifth Republic aronga siyana zvikuru kuchinja French kuyunivhesiti hurongwa. mu 1971, vashanu mano vekare yaimbova University kweParis vakaparadzana uye ipapo Re-yakaumbwa kupinda gumi interdisciplinary mumayunivhesiti nokuda Faure Law.
Mana mumayunivhesiti zvitsva izvi ikozvino kugoverana kwakavakirwa ari enhoroondo Sorbonne chivakwa, izvo, kusvikira nguva, vakanga ainyanya akachengeterwa nokukuyeuchidzai of Arts uye Human Sciences. Izvi mumayunivhesiti zvina vaipiwawo mamwe kwakavakirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika Paris.
mumayunivhesiti matatu ndachengeta Sorbonne zita sevamwe vavo yepamutemo rokuti: Yunivhesiti Paris I Pantheon-Sorbonne, University of Paris III – New Sorbonne uye University of Paris IV-Sorbonne Paris. The Sorbonne kwakavakirwa neimba chikamu Paris Descartes University (wenhaka ari Medicine dhipatimendi) uye Chancellery, simba dzidzo Paris.
Unoda kurukura Paris Descartes University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Paris Descartes University iri Map
Photos: Paris Descartes University pamutemo Facebook
Paris Descartes University wongororo
Join kukurukura pamusoro Paris Descartes University.
diki 2 University of Health uye Mutemo diki
University of Nice Sophia Antipolis Zvakanaka
University reStrasbourg Strasbourg